Coordinator – Page2– Free Expression Myanmar
အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုက ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဥပဒေ (မူကြမ်း) ဆိုသော စာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ရာ ၎င်းအား ရေးဆွဲသူများမှာ ပြည်သူက ဥပဒေပြုအာဏာအပ်နှင်းထားသူများ မဟုတ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများက ယင်း စာအပေါ် ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပင် လက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဥပဒေ (မူကြမ်း) ဆိုသည့် ဒီမိုကရေစီလုပ်ထုံးလုပ်စဉ်များနှင့် ဆန့်ကျင်သော ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ကာ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လိုင်စင်ရရှိသူများကို သဘောထား မှတ်ချက်တောင်းခံလာကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ၂။ ကနဦးအချက်အနေဖြင့် ယင်းကိုရေးဆွဲသူများမှာ အများပြည်သူက
Feb 11, 2021 by Coordinator in News သတင်း
Statement by Myanmar human rights organisations on Myanmar coup မြန်မာပြည်အား စစ်အာဏာသိမ်းခံရမှုအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားပြုသူများအနေဖြင့် စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းသည့် ကိစ္စရပ်အပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ရှုံ့ချ လိုက်သည်။ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေး တို့ အားလုံးအား စစ်တပ်၏ သိမ်းယူမှုအပေါ် ရှုံ့ချကန့်ကွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သား များအနေဖြင့် ဒီမိုက‌ရေစီ၊ လွတ်လပ်မှု ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မိမိတို့၏လိုအင်များကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပလေ့လာသုံးသပ်ကြသူများသည်ပင် လွတ်လပ်၍မျှတသောရွေးကောက်ပွဲဟု အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့
Feb 05, 2021 by Coordinator in News သတင်း
Looking forward to 2021 — ၂၀၂၁ ဆီသို့မျှော်မှန်းခြင်း
ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါ သည် ကမ္ဘာကြီးကို ဖျက်ဆီး ထိခိုက်စေခဲ့သောကြောင့် FEM သည်လည်း နည်းလမ်းအသစ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ထိန်းညှိဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးစားခြင်းဖြင့် အပြောင်းအလဲများ စွမ်းဆောင်ရယူရင်း ၂၀၂၀ ကိုကုန်ဆုံးဖြတ်သန်းခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၀၂၁ ကိုဦးတည် မျှော်မှန်းနေပါသည် ။ အောင်မြင်မှုများ ကိုဗစ် ၁၉ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်မှု အချို့ ရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေအဆုံးအဖြတ်များနှင့် အတွေ့အကြုံများ ၊ အင်တာနက်လွတ်လပ်မှု အခြေအနေ ၊ သတင်း မီဒီယာကဏ္ဍလွတ်လပ်မှု ရေစီးကြောင်းအခြေအနေ စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍
Jan 08, 2021 by Coordinator in News သတင်း
New job: Human Rights Law Officer / Senior Officer
FEM is seeking to hireaHuman Rights Law Officer / Senior Law Officer. They will be responsible for implementing legal aspects of Free Expression Myanmar’s projects. Responsibilities Reading FEM policies, reports, and other documents, and those reports of other relevant stakeholders, with the aim of
Jan 07, 2021 by Coordinator in Jobs
New job: Human Rights Officer / Senior Officer
FEM is seeking to hireaHuman Rights Officer / Senior Officer. They will be responsible for implementing Free Expression Myanmar’s projects. Projects are likely to include covering digital rights. Responsibilities Reading FEM policies, reports, and other documents, and those reports of other relevant stakeholders, with